Onyankopɔn Tua Wɔn a Wɔn Ani Abere Rehwehwɛ No no Ka | Adesua
ASETENAM NSƐM Mayɛ Biribiara Ama Nnipa Ahorow Nyinaa
Adom Nti Wɔama Moade Mo Ho
‘Sɛ Mode Mo Adwene Si Honhom Mu Nneɛma So a Mubenya Nkwa ne Asomdwoe’
Montow Mo Dadwen Nyinaa Ngu Yehowa So
Yehowa Tua Wɔn a Wɔn Ani Abere Rehwehwɛ No no Ka
Odwo—Ɛno Ne Nyansa Kwan
Afe 2016 Ɔwɛn-Aban Mu Nsɛm a Wɔahyehyɛ
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | December 2016
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mixe Mongolian Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
“Ɛsɛ sɛ nea ɔba [Onyankopɔn] nkyɛn no gye di sɛ ɔwɔ hɔ, na ɔyɛ wɔn a wɔn ani abere rehwehwɛ no no katuafo.”—HEB. 11:6.
NNWOM: 85, 134
Yɛbɛyɛ dɛn ahu sɛ Yehowa tua n’asomfo ka?
Ɔkwan bɛn so na Yehowa hyiraa n’asomfo a wɔtenaa ase tete no?
Akatua bɛn na yenya fi Yehowa hɔ?
1, 2. (a) Abusuabɔ bɛn na ɔdɔ ne gyidi wɔ? (b) Nsɛmmisa bɛn na yɛrebesusuw ho?
YƐDƆ Yehowa “efisɛ ɔno na odii kan dɔɔ yɛn.” (1 Yoh. 4:19) Yehowa hyira n’asomfo anokwafo. Ɛno ne ɔkwan baako a wafa so ada ne dɔ adi akyerɛ yɛn. Dodow a yɛdɔ Onyankopɔn no, dodow no ara na yenya ne mu gyidi a ɛyɛ den. Na ɛma yegye di paa sɛ ɔwɔ hɔ, na otua wɔn a ɔdɔ wɔn no ka.—Kenkan Hebrifo 11:6.
2 Yehowa ani gye ho sɛ obetua n’asomfo anokwafo ka. Ɛyɛ ne su. Enti sɛ yenni gyidi paa sɛ Onyankopɔn betua wɔn a wɔn ani abere rehwehwɛ no no ka a, ɛnde na yɛn gyidi nyɛ papa, efisɛ “gyidi ne awerɛhyem a yɛde twɛn biribi a yɛn ani da so.” (Heb. 11:1) Nea gyidi kyerɛ ne sɛ yɛde awerɛhyem bɛtwɛn nhyira a Onyankopɔn ahyɛ ho bɔ no. Nanso, sɛ yɛtwɛn akatua no a, mfaso bɛn na yebenya? Ɔkwan bɛn so na Yehowa tuaa n’asomfo a wɔtenaa ase tete no ka? Na n’asomfo a wɔwɔ hɔ nnɛ no nso ɛ? Ma yɛnhwɛ.
YEHOWA AHYƐ BƆ SƐ OBEHYIRA N’ASOMFO
3. Bɔhyɛ bɛn na ɛwɔ Malaki 3:10?
3 Yehowa Nyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ obehyira n’asomfo anokwafo, enti waka akyerɛ yɛn sɛ yemmegye ne nhyira. Yɛkenkan sɛ: ‘Monsɔ me nhwɛ sɛ meremmue ɔsoro mfɛnsere mma mo na merenhwie nhyira ngu mo so mma emmu mo so anaa. “Asafo Yehowa anom asɛm ni.”’ (Mal. 3:10) Sɛ yegye Yehowa asɛm a wayi ne yam aka yi tom a, ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ anisɔ paa.
4. Adɛn nti na yebetumi anya asɛm a Yesu kae wɔ Mateo 6:33 no mu awerɛhyem?
4 Yesu hyɛɛ n’asuafo no bɔ sɛ, sɛ wɔde Ahenni no di kan wɔ wɔn asetenam a, Onyankopɔn bɛboa wɔn. (Kenkan Mateo 6:33.) Nea ɛmaa Yesu hyɛɛ saa bɔ no ne sɛ, na onim sɛ Yehowa yɛ ɔnokwafo. Ná Yesu nim sɛ Onyankopɔn bɔhyɛ bam bere nyinaa. (Yes. 55:11) Enti yebetumi anya awerɛhyem sɛ, sɛ yɛn nso yenya Yehowa mu gyidi a ɛyɛ den a, obedi ne bɔhyɛ yi so: “Merennyaw wo na merempa wo nso da.” (Heb. 13:5) Yehowa bɔhyɛ yi boa yɛn ma yɛte asɛm a Yesu kae sɛ yɛnhwehwɛ Ahenni no ne Onyankopɔn trenee kan no ase yiye.
Yesu ka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ, nneɛma a wɔde abɔ afɔre no, wobenya so akatua (Hwɛ nkyekyɛm 5)
5. Adɛn nti na mmuae a Yesu de maa Petro no hyɛ yɛn gyidi den?
5 Bere bi, ɔsomafo Petro bisaa Yesu sɛ: “Hwɛ! Yɛagyaw nneɛma nyinaa abedi w’akyi; dɛn koraa na yebenya?” (Mat. 19:27) Sɛ́ anka Yesu bɛka Petro anim sɛ wabisa asɛm a ɛte saa no, Yesu ka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ, nneɛma a wɔde abɔ afɔre no, wobenya so akatua. Yesu ne asomafo no ne afoforo bedi ade wɔ soro daakye. Seesei mpo, akatua bi wɔ hɔ. Yesu kae sɛ: “Obiara a wagyaw afie anaa nuabarimanom anaa nuabeanom anaa papa anaa maame anaa mma anaa nsase esiane me din nti no benya no mmɔho pii na wanya daa nkwa.” (Mat. 19:29) Ná nhyira a Yesu asuafo benya no som bo koraa sen biribiara a wɔde bɛbɔ afɔre. Ahenni no nti, sɛ yɛtwe yɛn ho fi nneɛma bi ho anaa yegyae akyi di a, yebenya honhom fam papanom, maamenom, nuabarimanom, nuabeanom, ne mma. So ɛno nsom bo koraa nsen nneɛma a yɛde abɔ afɔre no?
6. Adɛn nti na Yehowa ahyɛ n’asomfo bɔ sɛ obetua wɔn ka?
6 Yehowa ahyɛ n’asomfo bɔ sɛ obetua wɔn ka, na ɛno boa n’asomfo no ma sɛ wohyia wɔn gyidi ho sɔhwɛ a, wotumi kura wɔn mũdi mu. Honhom fam nhyira pii a Yehowa Nyankopɔn asomfo anokwafo nya seesei akyi no, wɔde anigye rehwɛ kwan sɛ wobenya nhyira kɛse a ɛsen saa daakye. (1 Tim. 4:8) Nokwasɛm ne sɛ, gyidi a emu yɛ den a yɛwɔ sɛ Yehowa yɛ “wɔn a wɔn ani abere rehwehwɛ no no katuafo” no bɛboa yɛn ma yɛakura yɛn gyidi mu pintinn.—Heb. 11:6.
7. Ɔkwan bɛn so na anidaso te sɛ sɛkyɛ?
7 Yesu kae wɔ Bepɔw so Asɛnka no mu sɛ: “Momma mo ani nnye na munni ahurusi, efisɛ mo akatua sõ wɔ soro; saa ara na wɔtaa adiyifo a wodii mo anim no.” (Mat. 5:12) Wɔn a wobenya akatua wɔ soro no ‘ani gye, na wodi ahurusi.’ Saa ara na wɔn a wɔwɔ anidaso sɛ wobenya daa nkwa wɔ paradise wɔ asase so no nso ‘ani betumi agye na wɔadi ahurusi.’ (Dw. 37:11; Luka 18:30) Sɛ yɛwɔ anidaso sɛ yɛbɛkɔ soro oo, sɛ yɛbɛtena asase so oo, yɛn anidaso no betumi ayɛ sɛ “ɔkra sɛkyɛ a etim hɔ na ɛyɛ pintinn.” (Heb. 6:17-20) Sɛnea sɛ ahum bi retu a, sɛkyɛ ma po so hyɛn tumi gyina faako pintinn no, saa ara na anidaso a emu yɛ den a yɛwɔ betumi aboa yɛn ma yɛde akokoduru agyina pintinn wɔ Onyankopɔn som mu. Ebetumi ahyɛ yɛn den ma yɛagyina ahohia ano.
8. Ɔkwan bɛn so na anidaso tumi tew adwinnwen so?
8 Anidaso a Bible ama yɛanya no tumi tew adwinnwen a ɛda yɛn so seesei no so. Onyankopɔn bɔhyɛ ahorow no yɛ adwuma te sɛ honhom fam ngo a edwudwo koma a atu. Hwɛ sɛnea ɛyɛ awerɛkyekye sɛ yenim sɛ, sɛ ‘yɛdan yɛn adesoa to Yehowa so a, obeso yɛn mu’! (Dw. 55:22) Yebetumi anya awerɛhyem paa sɛ Onyankopɔn betumi ‘ayɛ ade ma akyɛn nea yɛsrɛ anaa yesusuw koraa.’ (Efe. 3:20) Wo de hwɛ, ɛnyɛ sɛ ɔbɛyɛ ade ama akyɛn nea yesusuw kɛkɛ, na mmom ɔbɛyɛ ama ‘akyɛn nea yesusuw koraa’!
9. Dɛn na yɛyɛ a ɛbɛma yɛanya Yehowa nhyira?
9 Sɛ yebenya Yehowa nhyira a, ɛsɛ sɛ yenya ne mu gyidi paa na yedi n’akwankyerɛ akyi. Mose ka kyerɛɛ Israelfo sɛ: “Yehowa behyira wo wɔ asase a Yehowa wo Nyankopɔn de ama wo sɛ agyapade no so. Nea ehia ara ne sɛ wubetie Yehowa wo Nyankopɔn asɛm na woadi ahyɛde a mede rema wo nnɛ yi nyinaa so. Yehowa wo Nyankopɔn behyira wo sɛnea ɔhyɛɛ wo bɔ no.” (Deut. 15:4-6) Wugye di paa sɛ, sɛ wokɔ so som Yehowa nokwarem a, obehyira wo? Nneɛma pii wɔ hɔ a wubetumi agyina so anya gyidi a ɛte saa.
YEHOWA TUAA WƆN KA
10, 11. Dɛn na Yehowa yɛe de tuaa Yosef ka?
10 Wɔkyerɛw Bible no sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛboa yɛn. Bible ma yehu sɛ, Onyankopɔn tuaa n’asomfo anokwafo pii a wɔtenaa ase tete no ka. (Rom. 15:4) Wɔn mu baako a Yehowa hyiraa no paa ne Yosef. Nea edi kan no, ne nuanom bɔɔ ne ho pɔw tɔn no ma ɔkɔyɛɛ akoa. Ɛno akyi, ne wura yere twaa atoro too no so ma wɔde no too afiase wɔ Egypt. Bere a Yosef da afiase no, ɔne Onyankopɔn ntam tetewee anaa? Dabi! Bible ka sɛ: ‘Yehowa kɔɔ so ara dii Yosef akyi, na oyii n’adɔe kyerɛɛ no. Ná Yehowa di Yosef akyi, na nea ɔyɛe biara, Yehowa hwɛ ma ɛyɛɛ yiye.’ (Gen. 39:21-23) Saa ahokyere bere no nyinaa mu mpo, Yosef nyaa abotare twɛnee ne Nyankopɔn.
11 Mfe bi akyi no, Farao yii Yosef fii afiase, na Farao maa akoa a n’asɛm yɛ mmɔbɔ no bɛyɛɛ sodifo a ɔto so mmienu wɔ Egypt. (Gen. 41:1, 37-43) Bere a Yosef yere woo mmabarima baanu maa no no, “Yosef frɛɛ ɔpanyin no Manase, efisɛ sɛnea ɔkae no, ‘Onyankopɔn ama me werɛ afi m’amanehunu ne me papa fie nyinaa.’ Ɔfrɛɛ nea ɔto so abien no Efraim, efisɛ sɛnea ɔkae no, ‘Onyankopɔn ama madɔ wɔ asase a mabrɛ wɔ so no so.’” (Gen. 41:51, 52) Esiane sɛ Yosef kɔɔ so dii Onyankopɔn nokware nti, Onyankopɔn hyiraa no, na wɔnam no so koraa Israelfo ne Egyptfo nkwa so. Asɛm no ne sɛ, Yosef hui sɛ Yehowa na otuaa no ka na ohyiraa no.—Gen. 45:5-9.
12. Bere a wɔsɔɔ Yesu hwɛe no, dɛn na ɛboaa no ma ɔkɔɔ so dii nokware?
12 Bere a Yesu Kristo nso hyiaa ne gyidi ho sɔhwɛ pii no, ɔyɛɛ osetie maa Onyankopɔn, na Onyankopɔn tuaa no ka. Dɛn na ɛboaa Yesu ma odii nokware? Onyankopɔn Asɛm no kyerɛkyerɛ mu sɛ: “Anigye a na ɛda n’anim nti, ohuu asɛndua ho amane, buu n’ani guu aniwu so.” (Heb. 12:2) Ɛda adi paa sɛ, Yesu ani gyei sɛ otumi tew Onyankopɔn din ho. Afei nso, onyaa n’Agya anim dom ne ne nhyira pii. Bible ka sɛ, “wakɔtena Onyankopɔn ahengua no nifa.” Bible san ka sɛ: “Onyankopɔn pagyaw no maa no gyinabea a ɛkorɔn, na ɔdom maa no din a ɛkyɛn edin biara.”—Filip. 2:9.
YEHOWA WERƐ MFI NEA YƐYƐ
13, 14. Sɛ yɛyɛ biribi ma Yehowa a, ɔte nka sɛn?
13 Yebetumi anya awerɛhyem sɛ Yehowa ani sɔ mmɔden biara a yɛbɔ sɛ yɛbɛsom no no. Sɛ ebia yɛn adwene nsi yɛn pi wɔ nneɛma bi ho anaa yenhu nea yɛnyɛ a, ɔte yɛn ase. Sɛ yɛn ho kyere yɛn wɔ sikasɛm mu, yɛyare, anaa yɛn abam bu ma enti yentumi nyɛ ɔsom adwuma no pii a, ɔte yɛn ase. Yebetumi anya awerɛhyem paa sɛ Yehowa ani sɔ mmɔden a n’asomfo rebɔ sɛ wobedi no nokware no.—Kenkan Hebrifo 6:10, 11.
14 Ɛsɛ sɛ yɛkae nso sɛ, yebetumi akɔ “mpaebɔ Tiefo” no anim na yɛanya awerɛhyem sɛ obetie yɛn sufrɛ. (Dw. 65:2) “Ahummɔbɔ Agya ne awerɛkyekye nyinaa Nyankopɔn” no bɛhyɛ yɛn den na waboa yɛn ma yɛakɔ so abɛn no. Ebia ɔnam yɛn mfɛfo asomfo so na ɔbɛboa yɛn. (2 Kor. 1:3) Sɛ yehu afoforo mmɔbɔ a, ɛka Yehowa koma paa. Bible ka sɛ: “Nea ɔdom ɔbrɛfo no de fɛm Yehowa, na nea ɔde ama no, Obetua no ka.” (Mmeb. 19:17; Mat. 6:3, 4) Enti, sɛ yeyi yɛn yam boa wɔn a wɔwɔ ahokyere mu a, Yehowa bu papa a yɛayɛ no sɛ Ɔno na yɛde afɛm no anaa yɛde abɔ no bosea. Na wahyɛ bɔ sɛ obetua yɛn ka wɔ ayamye a ɛte saa a yɛda no adi no ho.
AKATUA A YEBENYA NO NNƐ NE NEA YEBENYA NO DAA
15. Akatua bɛn na wohwɛ kwan sɛ wubenya? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
15 Kristofo a wɔde honhom asra wɔn no hwɛ ‘trenee ahemmotiri a Awurade, ɔtemmufo treneeni no, de bɛma sɛ akatua saa da no’ kwan, na ɛhyɛ wɔn gyidi den. (2 Tim. 4:7, 8) Nanso, sɛ Onyankopɔn amma woannya anidaso sɛ wobɛkɔ soro a, ɛnkyerɛ sɛ wasisi wo. Yesu “nguan foforo” ɔpepem pii de anigye rehwɛ kwan sɛ wobenya akatua a ɛne daa nkwa wɔ paradise asase so daakye. Ɛhɔ na ‘wobegye wɔn ani asomdwoe bebree mu.’—Yoh. 10:16; Dw. 37:11.
16. Awerɛkyekyesɛm bɛn na ɛwɔ 1 Yohane 3:19, 20?
16 Ɛtɔ da a, ebia yɛbɛte nka sɛ yentumi nyɛ pii, anaasɛ ebia Yehowa ani nsɔ nea yɛreyɛ. Yebetumi anya adwene mpo sɛ yɛmfata sɛ yenya akatua biara. Nanso, ɛnsɛ sɛ yɛn werɛ fi da sɛ “Onyankopɔn sõ sen yɛn koma na onim nneɛma nyinaa.” (Kenkan 1 Yohane 3:19, 20.) Sɛ gyidi ne ɔdɔ na ɛka yɛn koma ma yɛsom Yehowa a, ɛnde obetua yɛn ka. Sɛ ɛyɛ yɛn sɛ nea yɛreyɛ no nsom bo ahe biara mpo a, Yehowa betua yɛn ka.—Mar. 12:41-44.
17. Akatua a yɛrenya no seesei no bi ne dɛn?
17 Satan nhyehyɛe bɔne no nna a edi akyiri yi mu mpo no, Yehowa rehyira ne nkurɔfo. Ɔhwɛ ma n’asomfo di yiye wɔ honhom fam paradise no mu, na ɔma wonya asomdwoe ne anigye pii. (Yes. 54:13) Sɛnea Yesu hyɛɛ bɔ no, Yehowa ama yɛanya honhom fam abusua a ɔdɔ wom saa bere yi. Yehowa ama yɛanya honhom fam anuanom mmarima ne mmea wɔ wiase baabiara. (Mar. 10:29, 30) Afei nso, Onyankopɔn tua wɔn a wɔhwehwɛ no denneennen no ka ma wonya asomdwoe, abotɔyam, ne anigye pii.—Filip. 4:4-7.
18, 19. Yehowa asomfo te nka sɛn wɔ akatua a wonya no ho?
18 Yehowa asomfo a wɔwɔ wiase baabiara gye tom sɛ wonya akatua a ɛso bi nni fi Yehowa hɔ. Nhwɛso bi ni. Bianca a ofi Germany ka sɛ: “Meda Yehowa ase paa sɛ ɔka me ho da biara da, na ɔboa me ma migyina ɔhaw a mihyia ano. Wiase no mu ayɛ bagyabagya na anidaso biara nnim. Nanso, sɛ meyere me ho ne Yehowa yɛ adwuma a, me bo tɔ me yam. Bere biara a mede nneɛma bɛbɔ afɔre ama Yehowa no, ohyira me mmɔho mmɔho.”
19 Anaasɛ susuw Paula a ɔwɔ Canada a wadi mfe 70 no ho hwɛ. Yare bi aka n’akyi berɛmo, anaa n’akyi dompe ama ontumi nyɛ nneɛma pii. Onuawa no ka sɛ: “Sɛ mintumi nkɔ mmeae pii a, ɛnkyerɛ sɛ merentumi nyɛ asɛnka adwuma no pii. Mefa akwan foforo bi te sɛ tɛlɛfon so di adanse, na meyɛ bɔnnɔ so adansedi nso. Mewɔ nhoma bi a mekyerɛw kyerɛw nsɛm ne yɛn nhoma ahorow mu nsɛm gu mu. Na bere ne bere mu mesan kenkan de hyɛ me ho nkuran. Mefrɛ saa nhoma no ‘Me Nkwa Nhoma.’ Sɛ yɛde yɛn adwene si Yehowa bɔhyɛ ahorow so a, yebehu sɛ abasamtu yɛ bere tiaa mu ade. Tebea biara a yɛwom no, Yehowa ayɛ krado bere nyinaa sɛ ɔbɛboa yɛn.” Ebia tebea a wowɔ mu no nte sɛ Bianca anaa Paula de no. Nanso, ebia wobɛkae akwan bi a Yehowa afa so atua wo ne nnipa a wo ne wɔn te no ka. Eye paa sɛ wubedwinnwen sɛnea Yehowa retua wo ka saa bere yi ho, ne sɛnea obetua wo ka daakye nso ho!
20. Sɛ yefi yɛn kra nyinaa mu kɔ so som Yehowa a, dɛn na yebenya daakye?
20 Mma wo werɛ mmfi da sɛ, sɛ wufi wo komam bɔ mpae na wode ahotoso ka w’asɛm kyerɛ Onyankopɔn a, ɔbɛma wo “akatua kɛse.” Wubetumi anya awerɛhyem sɛ, ‘sɛ woyɛ Onyankopɔn apɛde wie a, wo nsa bɛka bɔhyɛ no.’ (Heb. 10:35, 36) Enti momma yɛnkɔ so nhyɛ yɛn gyidi den seesei, na yemfi yɛn kra nyinaa mu nsom Yehowa. Yebetumi ayɛ saa, efisɛ yenim sɛ Yehowa nsam na yebenya yɛn akatua.—Kenkan Kolosefo 3:23, 24.
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM December 2016